फिल्टर श्रृंखला FAQ - पाओटिंग Mingwang सिंचाई उपकरण कं, लिमिटेड।
सिंचाई पानी फिल्टर किन आवश्यक छ?
पानी निस्पंदन सबै सिंचाई प्रणाली को लागी महत्वपूर्ण छ। ... यदि साना बालुवा कणहरु यो clogging बिना तपाइँको प्रणाली को माध्यम बाट पारित गर्न सक्छन्, उनीहरु उपकरण मा लगाउने कारण। स्वचालित वाल्वहरु मा धेरै सानो पानी passageways जो प्लग हुन सक्छ वाल्व या त खोल्न वा बन्द गर्न असफल परिणामस्वरूप हुन सक्छ
कुन राम्रो डिस्क फिल्टर वा स्क्रिन फिल्टर हो?
कहिले काहिँ निस्पंदन गुणस्तर बराबर को रूप मा दिईन्छ जाल एक तुलनात्मक आकार स्क्रीन फिल्टर। एउटा फाइदा हो कि डिस्क फिल्टर मिडिया माथि छ फिल्टर यो हो कि यो कम फ्लश पानी संग अधिक छिटो backflush गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क फिल्टर कृषि सिंचाई मा प्रयोग आईएसओ 9912-2 मानक द्वारा कभर गरीएको छ।
फिल्टर कसरी सफा गर्ने?
कनेक्टर बाट फिल्टर हटाउनुहोस्। फिल्टर मा कुनै पनि निक्षेप बन्द गरेर सिँचाइ फिल्टर सफा गर्नुहोस्। सफा पानी संग एक सानो कन्टेनर मा फिल्टर छोड्नुहोस् र कुनै पनि अशुद्धता हटाउन
कुन जाल फिल्टर सिंचाई प्रणाली को लागी छनौट गर्न को लागी?
एक सामान्य नियम को रूप मा, म स्प्रे टाउको को लागी एक 60-70 जाल दायरा र ड्रिप सिंचाई को लागी वाल्व पछि 100-जाल फिल्टर को सिफारिश गर्दछु। एक राम्रो गुणस्तरीय निस्पंदन प्रणाली मा खर्च गरीएको पैसा कम रखरखाव र कम भाग प्रतिस्थापन संग सडक तल आफै को लागी तिर्नेछ।